‘Ngeke isinuke isicoco iChiefs’
OWAYENGUMDLALI we-Orlando Pirates, * -Edward Motale, ukhuluma ngokungenzeka esicocweni seligi Isithombe: BACKPAGEPIX
NDUDUZO DLADLA | November 19, 2019
‘NGEKE iKaizer Chiefs isinuke isicoco seligi’. Lokhu kushiwo u-Edward “Magents” Motale osengumhlaziyi webhola, odlalele i-Orlando Pirates wanqoba nayo isicoco seCAF Champions League ngo-1995.
Ngokusho kukaMotale, nakuba iChiefs isivule igebe lamaphuzu ayishumi esicongweni se-log ngamaphuzu awu-28 emidlalweni ewu-11 kodwa lokho akusho ukuthi izokhala imuke nesicoco seligi.
Abafana Bokuthula Noxolo balandelwa yiMamelodi Sundowns ngamaphuzu awu-18 emidlalweni eyishumi.
“Kuseva ukuthi abantu sebengathi iChiefs izonqoba isicoco seligi. Angikuboni lokho kwenzeka. Abadlali beChiefs basazokhathala futhi kusazoba nabalimalayo namakhadi njalo njalo. Embangweni wesicoco seligi akubalulekile ukuthi uqala kanjani kodwa okubalulekile wukuthi uqeda kanjani,” usho kanje uMotale.
Akuyona into efihlwayo ukuthi uMotale ubengumdlali wePirates futhi naye akakufihli ukuthi ungumlandeli wokuqina weZimnyama. Lokhu kuphoqe ukuthi intatheli yeSolezwe imbuze ukuthi ngabe ukuhlaziya kwakhe iChiefs, akuncikile yini emizweni noma kumhawu wokuthi izimbangi zePirates zenza kahle.
“Cha akuncikile emizweni engikushoyo. Mina ngikhuluma ibhola kwaphela. Empeleni ngokwami ngibona isicoco singaya noma kubani, wonke amaqembu asavulelekile.”
Ebuzwa ukuthi ngabe ubona ukuthi yiliphi iqembu elizokhala lemuke nesicoco seligi, nemali ewu-R15 million, uMotale uthe: “Kunzima ukusho ukuthi kuzoba yiliphi iqembu kodwa sengivezile ukuthi iningi lamaqembu lisenalo ithuba. Kodwa ngingalisho ligcwale umlomo elithi ngeke kube yiMamelodi Sundowns ngoba nayo idlala njalo, lokho kuzoyenza ikhathale”.
Njengoba ekhuluma kanjena ngeChiefs uMotale kodwa iyona ebonakala isethubeni elihle lokunqoba isicoco seligi. Isizathu salokhu wukuthi kayidlali emiqhudelwaneni yeCAF (okuyiChampions League neConfederations Cup). Ngaphandle kwalokho ayingenanga kwiTop 8, nokuyenze yangaba khona kwiMTN 8 nonyaka.
Lokhu kungahumusheka ngokuthi abadlali beChiefs bachithe isikhathi esiningi bephumule, kwanika nomqeqeshi * -Ernst Middendorp isikhathi eside sokwazi kangcono isikwati sakhe. Lokhu kuyacaca nasenkundleni njengoba ibonakala njengeqembu elizalwe kabusha. Empeleni umqeqeshi weSundowns, uPitso “Jingles” Mosimane, useke wakuveza lokho kwabezindaba esho nokusho ukuthi Amakhosi asethubeni elihle lokunqoba isicoco seligi ngoba aphumule kakhulu uma eqhathaniswa namanye amaqembu.